တစ်ကိုယ်တော်ဘတ်စ်ကားလျှောက်လွှာအား Hacettepe ကျောင်းသားများပြောဆိုသော - RayHaber
Homeတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီHacettepeli ကျောင်းသားတစ်ကိုယ်တော်ဘတ်စ်ကားလျှောက်လွှာပါအကျဉ်းဖော်ပြချက်မှ
08 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 06 တူရကီ, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, တူရကီ 0
ဒါကြောင့်အဘယ်သို့မိန့်လျှောက်ထားရန် Hacettepeli တစ်ကိုယ်တော်ဘတ်စ်ကားကျောင်းသားများကို
သူကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏စကားသံကိုနားထောင်နှင့်အနှေး, ကျောင်းသားများကြောင်းနှစ်သက်ဆုံးဖြတ်ချက်များစေရန်ဆက်လက်တူရကီမြို့တော်မြို့တော်ဝန် Mansoor ၏တောင်းဆိုချက်များကိုနားထောင်တယ်။
ယင်း၏ကတိတော်များကိုတဦးတည်းအားဖြင့်တဦးတည်းဖြည့်ဆည်းစီးပွားရေးကိုအထောက်အကူပြုသောဝန်ဆောင်မှုများကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့ရေဥပဒေကြမ်းများအနှေးဥက္ကဋ္ဌကျောင်းသားများကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်အများအပြားဒေသများရှိ "ကျောင်းသား-ဖော်ရွေမြို့တော်" ဆောင်ပုဒ်သည်။
ကျောင်းသားများရေဥပဒေကြမ်းများအပေါ် applications များ 50 ရာခိုင်နှုန်းကိုလျှော့စျေး၏ Chairman နှေးကွေးမှစတင်ကျောင်းဝင်း Beytepe အပေါ်လေ့လာနေနောက်ဆုံးတော့ Hacettepe တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများကိုအနီးကပ်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
SOLO အခမဲ့ဘတ်စ်ကား SERVICE ကိုစတင်
တူရကီမြို့တော်မြို့တော်ဝန် Mansoor သွန်သင်၏အတ္တအထွေထွေညွှန်ကြားမှုနှေးခြင်း, Hacettepe တက္ကသိုလ်အပေါ်ကျောင်းသားများ Beytepe ကျောင်းပရဝုဏ် 20 အခမဲ့တစ်နေ့လျှင်5တထောင်တစ်ကိုယ်တော်ဘတ်စ်ကားန်ဆောင်မှုများပေးခြင်းစတင်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
215အခမဲ့တစ်ကိုယ်တော်အဆိုပါ Metro ထွက်ပေါက်ကနေကျောင်းဝင်းသို့ကျောင်းသားများကိုရွှေ့ဖို့အခမဲ့ထိုနေ့၏706.30-20.00 နာရီအကြားဘတ်စ်ကား, Çayyoluအပြင်ဘက်ဘတ်စ်ကားတင်ခဲ့သည်။
လျှောက်လွှာ၏ပထမနေ့၌အခမဲ့ဘတ်စ်ကားကိုအသုံးပြုဖို့သူအကျောင်းသားများ, သူတို့ရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုရှိပါကြောင်း, သူတို့ကသမ္မတဤစကားများအားဖြင့်နှေးကျေးဇူးတင်ကြောင်း:
(21 နှစ်) -İre Aslan: "ဒါဟာအစက်အပြောက်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူနေ့စဉျမပွားများသူသည်ငါတို့အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ညှဉ်းဆဲဖြစ်လာခဲ့ပါသည်အဖြစ်ခဲ့သည်ဘတ်စ်ကားအဖြစ်လက်စွပ်၏ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ကသမ္မတ Mansur နှေးကျေးဇူးတင်ဖို့ဒီအခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားသံကိုငါကြား၏။ "
(24 နှစ်) -Ade ငါÜngör: အလုပ်အများဆုံးကြိမ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ "6.30-20.00 နာရီများထဲတွင်ထိုကဲ့သို့သောအလေ့အကျင့်ရှိသည်ဖို့အလွန်ကောင်းခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့သမ္မတကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ "
လကနေ Yuksel (21 နှစ်ရှိပြီ): "ငါသည်အလွန်အသုံးဝင်သောခဲ့ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်စောင့်ဆိုင်းရန်ခက်ခဲမယ့်အဖြစ်ကဒီမှာကျောင်းသွား။ အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ "
-Esr Şahin (20 နှစ်ရှိပြီ): "စဉ်းစားပါပထမဦးဆုံးသောနေ့ ရက်မှစ. ကျောင်းသားများကိုသူမြို့တော်ဝန်တာဝန်များကိုသို့ရောက်လာသောပြသခဲ့သည်။ ဒီဘတ်စ်ကားပေါ်တွင်အလုပ်အများဆုံးနာရီအလွန်ကောင်းသည်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတ Mansur ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ "
(19 နှစ်) သတိပေး -Nervous: "Mansur ကျနော်တို့ကိုချစ်နေတဲ့သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှေး။ ဒါဟာကျောင်းသားအလုပ်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ ကျနော်တို့စီးပွားရေးကိုထောကျပံ့ပေးမယ့်နေကြသည်။ TL 60 200 binişlikကိုလည်းဖယ်ရှားများ၏ခွင့်ပြုချက်တစ်ကဒ်ကိုပေး၏။ အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ "
-Melih Toy (19 နှစ်ရှိပြီ): "ကျနော်တို့ကအခုချိန်မှာကျောင်းသားများအတွက် Mansur နှေးအလုပ်စောင့်ကြည့်ပါတယ်။ အခမဲ့တစ်ကိုယ်တော်ဘတ်စ်ကား, ဘတ်စ်ကားတန်းစီလျှော့ချခြင်းနှင့်ပင်သက်သာခြင်းစောင့်ဆိုင်းလျက်ရှိသည်။ ကျနော်တို့ကိုအအားထောက်ခံမှုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ "
ငါ -Hides မွတ်စ်လင် (20 နှစ်ရှိပြီ): "ငါသည်အလွန်သွားလေ၏။ ကျောင်းသားများကိုပြီးသားဒီအခမဲ့ဘတ်စ်ကားကျောင်းသားများကိုအတွက်ကောင်းသောအလေ့အကျင့်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဤမျှလောက်န့်အသတ်ဘဏ္ဍာရေးနည်းလမ်းများဖြစ်ကြသည်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ Mansur အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှေးကွေး။ "
နိုင်ငံတော်သမ္မတကျောင်းသားများအနှေး 60 ပေး. စာရင်းပေးသွင်းထားကဒ် applications များနှုန်း 200 binişlikကျောင်းသားများကိုအောက်တိုဘာလ 20 အပေါ်ကိုစတင်လိမ့်မည်ဟုအခြားသောဧဝံဂေလိတရား။
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ဖိုနှင့်တစ်ကိုယ်တော်အမျိုးအစားသဘာဝဓာတ်ငွေ့ဘတ်စ်ကားAlınacaktırလှုံ့ဆော်မှု 06 / 06 / 2013 ဖိုနှင့်တစ်ကိုယ်တော်အမျိုးအစားဓါတ်ငွေ့ဖြင့်ပစ်ခတ်ဘတ်စ်ကားAlınacaktır KONYA Metropolitan စည်ပင်သာယာ 100 အရေအတွက် (40 တစ်ခုချင်းစီဖိုရိုက် 60 အရေအတွက်တစ်ကိုယ်တော်အမျိုးအစား) ဓါတ်ငွေ့ဘတ်စ်ကားပစ်ကပ် 4734 အမှတ်အပိုဒ်အများပြည်သူဝယ်ယူရေးပညတ်တရား၏ 19 အားဖြင့်ပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မည်ပစ်ခတ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2013 / 63053 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Merkez Mah ။ Vatan Cd ။ အမှတ်2Selçuklu / KONYA ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3323551731 - 3323553745 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: satinalma@konya.bel.t သုံးခုသည်) နူးညံ့သောစာရွက်စာတမ်းကိုအင်တာနက်လိပ်စာ (ရှိလျှင်) မြင်နိုင်ပါသည်: https://ekap.kik.gov ။ TR / ECAP / 2-တင်ဒါဘာသာရပ် ...
33 ။ အစ္စတန်ဘူလ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော် Renault ကအင်ဂျင်ကပြောပါတယ် 07 / 04 / 2014 အစ္စတန်ဘူလ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော် Renault ကအင်ဂျင် Renault ကပြောပါတယ်, ရှည်လျားယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာများအတွက်အစ္စတန်ဘူလ် Foundation ကဖွဲ့စည်းကမ္ဘာ့ဦးဆောင်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်၌မမှန်ထောက်ခံမှုခံရပြီ, ဧပြီလ 20 33 သည်အထိဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်လည်းအစ္စတန်ဘူလ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ပြသသည်။ တူရကီရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာ 100 ။ ဘယ်က၎င်း၏အသက်, 33 အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့။ Renault ကအစ္စတန်ဘူလ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ရဲ့အဖွင့် Gala, "ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကုန်ကျစရိတ်" သူတို့မော်တော်ယာဉ်များ၏တန်ဖိုးပွဲတော်ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုပေးပွဲအနီရောင်ကော်ဇောမော်တော်ယာဉ်များကိုတှေ့မွငျကျြောကွားသောအမည်များ။ အဆိုပါပွဲတော်ကာလအတွင်း Renault ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုယာဉ်များရန်ဖိတ်ခေါ် "ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကုန်ကျစရိတ်" နိုင်ငံခြားနာမည်ကြီးအမည်များမှခွဲဝေလိမ့်မည်။ ပွဲတော်ရဲ့အများဆုံးမျှော်လင့်ရုပ်ရှင်မှလက်မှတ်တွေအနိုင်ရ Facebook တွင် Renault က cinemagoers အောက်ပါ, အပြင်။ ပါးလွှာခြင်းနှင့်အစွမ်းထက် Renault က ...
ခရီးသည်တိုင်ကြားပေမယ့် IETT Metrobus အေးစက်အလုံအလောက်ပြောပါတယ် 03 / 04 / 2013 ခရီးသည်တိုင်ကြားပေမယ့်လုံလောက်အောင်ရာပေါင်းများစွာကလူထောင်ပေါင်းများစွာ၏များ၏ Metrobus လိုင်းတို့သည်ကြီးစွာသောဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်အသုံးပြုနိုင်သည်နေ့တိုင်းပြောပါတယ်ကြောင်း IETT Metrobus လေအေးပေးစက်။ သို့သော်ကြောင့်ယာဉ် '' အနံ့ '' ခရီးသည်ဖွဲ့စည်းတို့အတွက်မှရောဂါလက္ခဏာတွေဖြစ်ပေါ်စေသည်။ IETT အရာရှိများက "ကျွန်တော်တို့ရဲ့အေးစက်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ အနံ့ကြောင့်တို့အတွက်စေ၏။ "Dese ခရီးသည်ကိုလည်းတိုတောင်းတဲ့အချိန်အတွင်းမှာပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့မြျှောလငျ့။ အစ္စတန်ဘူလ် Metrobus, အချိန်ပိုအတွက်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အများဆုံးဦးစားပေးနည်းလမ်းများအတွက်ကြောင့်အရှူဖို့မဖြစ်နိုင်သလောက်ဖြစ်လာထွက်ခွာနှင့်ဆိုက်ရောက်ချိန်များတွင် overcrowding ၏။ တချို့ကမော်တော်ယာဉ်များ, လေအေးပေးစက်အလုပ်မလုပ်ပါဘူးmetrobüslနဲ့ပေါင်းစပ်, ခရီးသွားလာမှုအတွက် Coke tool ကို၏ဖိုတစျပိုငျးကိုအတူကြီးမားသောဖိုတို ...
သံခရီးသည်နှင့်အဘယ်သို့မိန့်အကြံအဥာဏ်ကျွန်တော်တို့ကို? 17 / 04 / 2013 သံခရီးသည်နှင့်အဘယ်သို့မိန့်အကြံအဥာဏ်ကျွန်တော်တို့ကို? မနေ့ကသံခရီးသည်သပိတ်ပေါ်ကြ၏ ယနေ့ဆရာဝန်များကနေအလုပ်လုပ်သူကန်ထရိုက်တာများ, ကျန်းမာရေးလုပ်သားများနေ့ကဒဏ်ခတ်! ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကျွမ်းကျင်သူများ Turk-မှီခိုကျန်းမာရေး-စီးပွားရေးနှင့်အရာရှိ Sen-မှီခိုကျန်းမာရေး Sen Syndicate များ၏ရုန်းကန်မှုအတွက်, အရပျယူသငျ၏ရထားလမ်း Turk-မှီခိုမီးရထားအလုပ်သမားများသမဂ္ဂနှင့်အရာရှိ Sen ပို့ဆောင်ရေး-အရာရှိချုပ်ဒဏ်ခတ် အခွအေနနေသူများကဖန်တီး "ဖြစ်နိုင်သမျှသောအရပ်သည်အဘယ်သို့" ဤသမဂ္ဂများ၏မန်နေဂျာ၏သင်တန်းနေရာယူပါ။ ကြောင့်ဤသမဂ္ဂများ၏မန်နေဂျာများ, ပြည်ထောင်စု "ပြည်ထောင်စုထောက်ခံသူများ" အရည်အချင်းပြည့်မီရန်ခံထိုက်ရှိခြင်းပါပြီ။ ဒါပေမယ့်အလုပ်သမားများ၏ကဏ္ဍများအတွက်အလုပ်လုပ်နေသူတို့အဘို့, ပြည်ထောင်စုခေါင်းဆောင်မှု mAzdIr ဆန့်ကျင်ဖွင့်လှစ်အလံမရှိတော့ရွှေ့ဆိုင်းစေခြင်းဟုဆိုနိုငျပါသညျ။ အစိုးရကသင့်သောကြောင့် ...
traffic ISPARK ပြုဆက်လက်ရပ်ထားလမ်းပြောပါတယ် 21 / 10 / 2013 လမ်းပေါ်မှာရပ်ထား ISPARK မျှအသွားအလာ, ဆက်လက် says: İSPARKသယ်ဆောင်ရန်ထူထောင်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဘူတာမှအနီးကပ်ကားပါကင်နေရာများသွားရမည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီကြောင့်ပြင်းထန်သောအကျိုးစီးပွားအသစ်သောဒေသများဖန်တီးဖို့ကြိုးစားနေသည်။ ISPARK, မြေအောက်ရထား, Metrobus, လှေနှင့်လမ်းယာဉ်များ Marmaray သည်ဤမော်တော်ယာဉ်များနှင့်အတူဆက်လက်ချင်သူကိုယာဉ်မောင်းများအတွက်ဖြန့်ချိနှင့်အတူ '' ပန်းခြံ, Continue '' ထလာအလွန်အကျွံအကျိုးစီးပွားကြောင့်စီမံကိန်းအရှိန်သိရသည်။ ISPARK အစ္စတန်ဘူလ် 34 ဝေးယာဉ်တန်းကနေကီလိုမီတာတည်ထောင်ခဲ့ပြီးဆွဲထဲကနေ 10 100 တထောင်ကိုအပိုင်းပိုင်းမော်တော်ယာဉ်ရပ်နားနှင့်လမ်းအသွားအလာကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏။ အဆိုပါယာဉ်မောင်းကယာဉ်ကိုရပ်တန့်ဘဲသေချာပေါက်ရှာဖွေနေရာအရပ်ပု Metrobus မှကြွလာရပ်လို့မရဘူး ...
ခရီးသည်တိုင်ကြားပေမယ့် IETT Metrobus အေးစက်အလုံအလောက်ပြောပါတယ်
traffic ISPARK ပြုဆက်လက်ရပ်ထားလမ်းပြောပါတယ်
ISPARK3TL ဆက်လက်ရပ်ထားပြောပါတယ်
ပြည်သူ့ရဲ့အကျဉ်းဖော်ပြချက်တစ်ခုလက်ထောက်၏ Suleyman Karaman 's အမည်စာရင်းတင်သွင်း (ဗီဒီယို)